လမ်းညွှန်ဘုရှ် | Straight guide bush | Router guide bushing kit | Guide bushings and adaptors Guide bushing router plate | Router template guide bushing kit Guide pin supplier | Understanding guide bushings | Stripper guide bushings Straight Guide bush Material: SKD61 Tolerance: +/-0.003mm as per requirement Finish: DLC coating…
Chemical Black gauge Material: SS400 Tolerance: +/-0.002mm လိုအပ်ချက်အရ လျှောက်လွှာ: Gauge is used to measure or test. Noun gauge isatool you can use to make suchameasurement. အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ခြင်း: 10 နေ့ရက်များ ပို့ဆောင်ခြင်း။: 3~ ၁၀ ရက် DHL / UPS / FedEx အမြန်နှုန်းဖြင့်, လေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းစသည်တို့. If you have some problems about Chemical Black…
Precision Ceramic gauge block Start can custom various chamfered rectangular ceramic gauge blocks to meet industrial needs. ပစ္စည်း: Ceramic gauge blocks Process : Grinding Material: Ceramic Tolerance: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ, final QC reports Processing time7days…
Punching die in compound blank-and-pierce die In blanking the punched out piece is used and calledablank; in piercing the punched out piece is scrap. ပစ္စည်း: Die holder, lower holder, holding plate, stripper Process : အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - Wire cutting Material: SKD11 Tolerance: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန်…
Stamping high precision die for metal article Upper punch, lower insert are both crucial parts in metal tooling Item: Precision high speed steel punch/die for compound die Process : အပူကုသမှု - ကြိတ်ခွဲ - ဝိုင်ယာကြိုးဖြတ်သည့်ပစ္စည်း: SKH51 Tolerance: 0.002mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ:…
Tungsten carbide Drawing Die သည်လာဘ်ထိုးသောစာနယ်ဇင်းတွင်အသုံးပြုသည်
Tungsten carbide Drawing Die used in the punch press Die are widely used in compound drawing die for blanking, drawing and piercing. ပစ္စည်း: Drawing die for drawn cup Process : ကြိတ်ခွဲ - Wire cutting -EDM- ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: Tungsten carbide သည် စာနာထောက်ထားမှု၊: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, Japan Seibu M50B…
စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်ထုခြင်း မြင့်မားသောတိကျသော တန်စတင်ကာဗိုက် ဘဲဥပုံဖောက်စက်
ပုံဆွဲပစ္စည်းအဖြစ် တိကျသေချာသော သတ္တုတံဆိပ်တုံးထုခြင်း: တိကျသော တန်စတင်ကာဗိုက် ဘဲဥပုံဖောက်စက်, မမှန်ဖောက်စက် လုပ်ငန်းစဉ် : ကြိတ်ခွဲ - ကြိုးဖြတ်ခြင်း။ - EDM - ပွတ်တိုက်ပစ္စည်း: Tungsten carbide သည် စာနာထောက်ထားမှု၊: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန် Seibu M50B လက်မှတ်များ: ပစ္စည်းလက်မှတ်, CMM စစ်ဆေးခြင်း...
ဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Custom Blanking punch
ဆက်သွယ်ရေးစက်သုံး Punch အတွက် Blanking Punch များသည် stamping die အားလုံးအတွက် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။, blanking die လိုမျိုး, ကွေးညွှတ်သေဆုံး, ပုံဆွဲခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။, ပစ္စည်း: ဆက်သွယ်ရေး ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်တောက်ရန် လျှပ်တစ်ပြက် ခလုတ်များ : ကြိတ်ခွဲ - ဝိုင်ယာကြိုးဖြတ်သည့်ပစ္စည်း: Tungsten carbide သည် စာနာထောက်ထားမှု၊: ±0.001mm. စက်ရုံ: ဂျပန် Sodick ALN400Gs,ဂျပန် Sodick AQ560Ls, ဂျပန်…